Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 18)
U fiirso xusuusta cusub ee Samsung ee mobiladooda leh kaydinta UFS 3.0
Samsung ayaa hadda ku dhawaaqday xusuusteeda cusub ee RAM iyo kaydinta oo imaan doonta sannadaha 2020 iyo 2019 siday u kala horreeyaan dhammaadka-dhamaadka.
Sida loo raaco dhacdada bandhigga ee OnePlus 6T
Sida loo raaco soo bandhigida tooska ah ee OnePlus 6T Soo ogow sida ugu fudud ee aad ula socon karto dhacdadan bandhigga ah.
Nokia 7.1 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Nokia 7.1 ayaa si rasmi ah u yimid Spain. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan imaatinka qadka dhexe ee Spain si rasmi ah. Waxaa la heli karaa Oktoobar.
Ciyaaraha cusub ee Xiaomi Black Shark ayaa hadda rasmi ah. Baro wax walba oo ku saabsan taleefanka ugu horreeya ee suuqa leh 10 GB oo RAM ah.
Samsung Galaxy S10s oo wata Chipsets Exynos waxay yeelan doonaan guddi wareeg ah oo horumarsan oo SLP ah
Samsung Galaxy S10s oo wata processor-ka Exynos waxay lahaan doonaan guddi wareeg ah oo horumarsan oo SLP ah gudahana meel badan. Waan kuu balaarinay!
Batariyada cusub ee Graphene ee Samsung ayaa ka qaadi doona Galaxy Note 5 10 jeer ka dhakhso badan
Bateriga loo yaqaan 'graphene' ayaa micnaheedu yahay inuu 5 jeer ka dhaqso badan yahay batteriga caadiga ah ee lithium-ion. Horumar ka yimid Samsung si loo beddelo suuqa.
HTC Exodus: telefoonka cusub ee Taiwanese blokchain
Baxnaaninta HTC waa rasmi. Baro wax walba oo ku saabsan moobilka cusub ee shirkadda ee ku saleysan xannibaadda si aad u kaydiso cryptocurrencies si ammaan ah.
Netflix HDR waxay u timaadaa taleefannada cusub ee Android
Telefoonada cusub ee Android ee la jaan qaada Netflix HDR. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefannada cusub ee sida rasmiga ah loo caddeeyay.
Qaar ka mid ah Google Pixel 3 iyo Pixel 3 XL ma keydinayaan sawirrada ay qaadaan
In kasta oo ay jiraan tiro badan oo tijaabooyin ah oo ay soo saarayaashu ku fuliyaan boosteejooyinka intaanay gaarin ...
Tikniyoolajiyadda cusub ee 4-ta ah ee cajiibka ah ee ay Samsung Samsung kaga takhalusi doonto tirada suuqa
Waxaa jira 4 teknoolojiyad oo kuu iftiimin doona suuqa taleefannada casriga ah ee xad-dhaafka ah iyo in qaan-gaadhku u noqday maannada dadka wararka raadinaya.
Kashifay magaca suurtagalka ah ee Xiaomi Black Shark 2
Xiaomi Black Shark 2 horeyba wuxuu u leeyahay magac rasmi ah. Soo ogow magaca ay taleefanka cusub ee ciyaartu ku yeelanayso magaca Shiinaha.
Nokia X7 wuxuu si caalami ah u bilaabi doonaa magac ka duwan magacii laga filaayay
Nokia X7 waxaa si caalami ah looga bilaabi doonaa Nokia 8.1. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee magaca iyo magaciisa caalamiga ah.
Samsung waxay sii deyneysaa cusbooneysiinta Android Pie horaantii 2019
Samsung ayaa cusbooneysiin doonta Android Pie sanadka soo socda. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan goorta ay shirkaddu u soo saari doonto cusboonaysiinta taleefannadooda.
Samsung ayaa diyaarinaysa taleefankeeda ciyaaraha, sida lagu sheegay warbixin cusub
Samsung ayaa shaqeyneysa isla markaana diyaarinaysa taleefan soo socda oo loogu talagalay cayaartoyda la soo bandhigi doono dhamaadka Nofeembar. Waanu kugu balaarinay!
Nooca Nokia 8.1 ayaa imanaya: muxaadarooyinka muhiimka ah ee uu faafiyay Geekbench
Nokia 8.1 waxaa lagu sii daayay Geekbench oo leh processor Snapdragon 710, nooca ugu dambeeyay ee Android, iyo awood aad u fiican oo RAM ah. Waan kuu balaarinay!
OPPO waxay ku khiyaameysaa tijaabooyinka waxqabadka casriga ah
OPPO waxay khiyaameysay imtixaannada waxqabadka. Raadi wax badan oo ku saabsan falalka ay summaddu ku fulisay taleefannadooda.
OnePlus wuxuu wax ka beddelaa taariikhda soo bandhigidda ee OnePlus 6T
OnePlus 6T waxaa la soo bandhigi doonaa Oktoobar 29 si rasmi ah. Soo ogow sababaha ay summaddu u beddeshay taariikhda xaraynta.
Shaashadda Google Pixel 3 waxaa soo saaray LG
Yaab! Shaashadda Google Pixel 3 waxaa soo saaray LG, shirkadda fadhigeedu yahay Kuuriyada Koonfureed. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta!
Dib u eeg OUKITEL WP2, midka rooga ah ee leh batari aan dhammaad lahayn
Waxaan u dhignay OUKITEL WP2 imtixaanka, taleefanka casriga ah ee "all-terrain" oo wata shahaadada IP68 iyo batari aad u weyn oo 10.000 mAh ah, ha moogaanin!
Huawei Mate 20 Pro wuxuu helaa dhibco ka sarreysa tan Android kasta oo ku jirta AnTuTu
Huawei Mate 20 Pro ayaa dhaaftay oo heshay wax ka badan 307K dhibcaha tijaabooyinka AnTuTu, oo ah mid ka mid ah astaamaha ugu caansan.
Lenovo Watch S iyo Watch C: saacad casri ah iyo saacad xariif ah oo loogu talagalay carruurta
Lenovo Watch S iyo Watch C smartwatches waa rasmi. Baro dhammaan waxyaabaha ku saabsan aaladaha cusub ee la bilaabay.
Telefoonka isku laaban ee Huawei waa xaqiiqo wuxuuna imaan doonaa sanadka 2019
Maamulaha guud ee Huawei wuxuu xaqiijiyay inay ku shaqeynayaan taleefankooda isku laaban oo la soo bandhigi doono sanadka 2019 isla markaana uu yeelan doono isku xirnaanta 5G.
Samsung waxay soo saari laheyd Galaxy "shaashad dhan" iyadoon la helin darajo iyo kamarada hore shaashada hoosteeda
Way cadahay inaanan waligeen arki doonin taleefanka Samsung oo leh darajo. Iyo in ka badan markaan ognahay inuu leeyahay dhowr shati oo kamarad ah shaashadda hoosteeda.
Vivo Z3 waa rasmi: sifooyinka, qeexitaannada iyo qiimaha
Vivo Z3 waa mid rasmi ah oo laba nooc ah: mid leh Snapdragon 670 iyo mid kale oo leh Snapdragon 710. Raadi dhammaan faahfaahinta bartan-dhexe cusub.
Lenovo K5 Pro iyo K5s waa rasmi: qaababka, qeexitaanada iyo qiimaha
Lenovo K5 Pro iyo K5s ayaa si rasmi ah loo sii daayay. Ogow dhammaan astaamaha, qeexitaannada iyo qiimayaasha saldhigyadan cusub ee sumadda.
Lenovo S5 Pro hadda waa rasmi. Ogow dhammaan astaamaha, qeexitaannada farsamo iyo qiimaha bartan-dhexe cusub.
Tani waa sida dareenka sawirka faraha ee shaashadda Galaxy S10 uga duwan yahay inta kale
Dareenka faraha ee shaashadda Samsung Galaxy S10 ayaa ka duwan kan ay isticmaalaan shirkadaha kale sida Huawei ee Mate 20 Pro.
OnePlus 6T wuxuu la imaan doonaa Android Pie
OnePlus 6T wuxuu la imaan doonaa Android Pie asal ahaan. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan nooca nidaamka hawlgalka dhammaadka-dhamaadka sumadda.
EMUI 9.0 beta ayaa hadda loo heli karaa sagaal nooc oo Huawei iyo Honor ah
Huawei wuxuu sii daayay EMUI 9.0 oo ku saleysan Android 9.0 Pie ilaa sagaal nooc oo taleefannada Huawei iyo Honor ah. Waxaan kuu sheegeynaa waxay yihiin!
Xiaomi Mi MIX 2S oo ku saabsan in lagu cusbooneysiiyo Android Pie
Xiaomi Mi Mix 2S wuxuu noqon doonaa terminal-kii ugu horreeyay ee shirkadda Aasiya ay ku hesho Android Pie, waana sameyn doontaa maalmaha soo socda.
Samsung waxay isu diyaarineysaa furitaanka barnaamijka Android Pie beta
Shirkadda reer Kuuriya ee Samsung ayaa isu diyaarineysa inay albaabada u furto barnaamijka Android Pie beta
10-ka taleefan ee ugu awooda badan bisha Sebtember 2018, Sida laga soo xigtay AnTuTu Benchmark
Nokia X7 (7.1 Plus) durba si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay
Nokia X7: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan tan si rasmi ah loo soo bandhigay Nokia 7.1 Plus ka raadi sumadda.
Ku keydi Huawei Mate 20 Orange oo ku hel Huawei Watch GT bilaash
Huawei Mate 20 ayaa laga heli karaa Orange oo ay la socoto Huawei Watch GT hadiyad ahaan. Ku ogow dhiirrigelinta Orange illaa Oktoobar 31.
MANN 8S: roogga dhexe ee rooga ah ee cusub ayaa suuqa ku dhacay
MANN 8S waa taleefan dhexdhexaad ah oo dhex dhexaad ah oo hadda la iibin karo. Ogow qeexitaankiisa iyo qiimaheeda.
Huawei Mate 20 iyo Mate 20 Pro iyo tartanka
Dhowr bilood oo xan ah ka dib, caadi ahaan markaan ka hadlayno terminal-dhamaadka sare, shirkadda Aasiya waxay soo bandhigtay qiyaasta Mate 20. At Androidsis waxaan la barbar dhigeynaa inta kale ee ikhtiyaarrada sare ee suuqa.
Huawei Mate 20X: Aaladda casriga ah ee Huawei
Huawei Mate 20X: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax badan oo ku saabsan casriga casriga ah ee Huawei ee hadda la soo bandhigay.
Huawei Mate 20 RS Porsche Design: Moobaylku wuxuu sameeyay raaxo
Huawei Mate 20 RS Porsche Design: Qeexitaannada iyo qiimaha. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan noocaan ah Huawei-dhamaadka sare ee horay loo soo bandhigay.
Huawei Watch GT waa smartwatch cusub oo aan lahayn Wear Android ah
Ha iloobin Android Wear oo leh Huawei Watch GT cusub oo gaadha laba toddobaad nolosha batteriga haddii GPS iyo dareeraha garaaca wadnaha aan la isticmaalin.
Huawei Mate 20 iyo Mate 20 Pro: Shirkadda Huawei-dhamaadka sare
Huawei Mate 20 iyo Mate 20 Pro: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefannada cusub ee taleefanka sare.
Taariikhda soo bandhigida ee Xiaomi Black Shark 2 waa rasmi. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida taleefanka casriga ee ciyaaraha Shiinaha.
Xiaomi Mi Mix 3 horeyba wuxuu u lahaa taariikh bandhig
Taariikhda soo bandhigida ee Xiaomi Mi Mix 3 horeyba waa rasmi. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida ee dhammaadka sare ee sumadda Shiinaha.
Xiaomi Redmi Note 6 Pro ayaa si rasmi ah u timid Spain
Xiaomi Redmi Note 6 Pro waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain. Ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka taleefanka afar-kaameradda ah ee Spain.
Huawei Enjoy 9 Plus iyo Enjoy Max ayaa lagu dhawaaqay: astaamaha, qeexitaannada iyo qiimaha
Huawei waxay ku dhawaaqday Huawei Enjoy 9 Plus iyo Enjoy Max, oo ah laba terminaal cusub oo dhexda dhexe ah. Ogow qeexitaanadooda iyo qiimahooda.
Shaandheeyay qeexitaanno kala duwan oo Nubia X ah, oo ah calanka xiga ee shirkadda Shiinaha
Dhowr qeexitaan farsamo ee Nubia X ayaa goor dhaweyd lagu faafiyey Geekbenh. Ka baro astaamaha taleefanka soo socda shirkadda ZTE.
Palm wuxuu soo bandhigayaa moobiilkiisa gacanta oo leh kaliya 3,3 inji shaashad
Taleefanka gacanta ee cusub ee Palm ayaa soo jiidasho leh sababtuna tahay cabirkeeda oo aad u yar iyo quruxdeeda oo aad loo ilaaliyay. Smartphone ka duwan kuwa kale oo badan.
Astaamaha cusub ee 'Oukitel U23'
Shirkadda Aasiya ee Oukitel ayaa soo bandhigeysa P23, terminal u taagan ka shaqeynta MediaTek P23 iyo wejiga dhabarka.
Galaxy Note 9 wuxuu xaaqaa iPhone XS Max tijaabooyinka nolosha batteriga
Tijaabooyinka batteriga ee lagu soo rogay Galaxy Note 9 iyo iPhone XS Max, waxay na tusayaan in Samsung Smartphone uu yahay guuleystaha cad.
Nooca xasilloonida ee 'Poco Launcher' ayaa hadda laga heli karaa Google Play
Nooca xasilloon ee Bilowga POCO hadda waa la heli karaa. Ka ogow wax badan oo ku saabsan furahan Pocophone F1 hadda laga heli karo Play Store.
Sida loo raaco dhacdada bandhigga ee Huawei Mate 20
Sida loo raaco soo bandhigida Huawei Mate 20. Faahfaahin intaa ka badan ka ogow soo bandhigidda dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha.
Telefoonka casriga ah ee loo yaqaan 'blockchain smartphone' ee HTC ayaa horey u lahaa taariikh soo bandhigid
HTC Exodus waxay horey u leedahay taariikh rasmi ah oo soo bandhigid ah. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka taleefanka xannibista calaamadaha ee la soo bandhigi doono bishaan.
Xperia XZ2 iyo XZ2 Compact waxay bilaabeen inay helaan Android Pie
Iyadoo loo yaqaan 'Android Pie', waxay umuuqataa in Google ugu dambeynti rabto inuu joojiyo kala qaybsanaanta hal mar oo dhan, ama ...
Soo bandhigay qiimaha iyo taariikhda la sii deynayo ee Huawei Mate 20 Pro ee Yurub
La shaandheeyey qiimaha iyo taariikhda la sii deynayo ee Huawei Mate 20 Pro. Faahfaahin intaa ka badan oo ku saabsan qiimaha dhammaadka-sare ee Yurub ee iman doona deyrtan.
Haa waxaa jiri doona taleefan muhiim ah oo soo socda, wuxuuna si otomaatig ah uga jawaabi doonaa fariimaha
Telefoonka Muhiimka ah ee soo socda ee shirkadda Andy Rubin ayaa si toos ah uga jawaabi doona farriimaha, iyadoo lagu saleynayo warbixinnada waxa laga shaqeynayo.
Samsung ayaa soo dhigtay YouTube xayeysiiskii ugu horreeyay ee loogu talagalay Galaxy A9, taleefankii ugu horreeyay ee suuqa laga helo oo leh 4 kamaradood oo na siinaya natiijooyin cajiib ah.
Sixir qaadashada sawirada habeenkii bilaa iftiinka leh 'Night Sight' qaabka Google Pixel 3
Google Pixel 3 wuxuu awood u leeyahay inuu sawiro habeenkii qaado bilaa flash. Waxaan ku tuseynaa sixirka gadaashiisa mahadsanid sawirka xisaabinta.
Nokia 3.1 Plus ayaa yimid: la kulan waxa ka cusub shirkadda Finnishka ah
Nokia 3.1 Plus hadda waa rasmi. Ogow dhamaan astaamaha, qeexitaanada farsamo iyo qiimaha shirkada cusub ee terminalkeeda.
Pixel 3 XL iyo qarinteeda la qarin karo
Xogta Google Pixel 3 XL waxaa lagu qarin karaa softiweer, laakiin ma jirtaa baahi loo qabo? Haddii aadan jeclayn qormadan, si fiican u iibso taleefan kale oo casri ah.
Feejignaanta tayada muuqata ee sawirrada sawirrada kooxeed ee lagu qaaday Google Pixel 3
Haddii aad tahay taageere sawir-gacmeedyo ah oo aad jeceshahay qaadashada noocyada sawirrada, Google Pixel 3 ayaa hadda ah taleefanka ugu fiican.
Galaxy A9 2018: Samsung kii ugu horreeyay oo leh afar kamaradood oo gadaal ah
Galaxy A9 2018: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan heerka dhexe ee Samsung oo leh afar kamaradood oo gadaal ah.
Oppo K1: dhex-dhexaad cusub oo leh akhristaha faraha oo ku dhexjira shaashadda
Oppo K1 waa rasmi oo leh akhristaha sawirka faraha oo ku dhexjira shaashadda. Ogow astaamaha, xogta farsamada iyo qiimaha taleefankan.
A "top" casriga ah ee xilli-ciyaareedkii hore wali waa ikhtiyaar wanaagsan
Ma ka fikireysaa cusbooneysiinta taleefankaaga casriga ah? Miyay dusha sare ee noocyadu yihiin kuwo aan lagu heli karin adiga? Halkii laga heli lahaa bartamaha, dusha sare ee sanadkii hore ayaa ah ikhtiyaar wanaagsan
Samsung Galaxy Note 10 wuxuu sameyn lahaa la'aanta qalabka dhageysiga
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in shirkadda Kuuriya ee Samsung ay ka dhigi doonto isku xirnaanta jaantusyada dhamaadka xiga dhamaadka gebi ahaanba baabi'i doonta.
Shirkadda Huawei waxay ku dhawaaqeysaa baytariyada lithium-silicon taleefannadooda gacanta iyadoo ay la socoto hagaajinta xukun degdeg ah
Shirkadda Huawei ayaa hadda ku dhawaaqday nooc bateri cusub ah: Lithium-Silicon. Kuwani aad ayey uga fiican yihiin kuwa hadda Lithium-Ion.
Xogo cusub ayaa xaqiijinaya in Samsung Galaxy A9 (2018) ay la imaan karto afar kamaradood oo gadaal ah
Samsung Galaxy A9 (2018) ayaa la soo bandhigi doonaa berri iyadoo leh afar sawir oo sawir gadaal gadaal ah. Baro wax badan oo ku saabsan suurtagalnimada.
Galaxy A7 2018 wuxuu si rasmi ah u yimid Spain
Samsung Galaxy A7 2018 waxaa si rasmi ah looga bilaabay dalka Spain. Faahfaahin dheeraad ah ka ogow imaatinka dhexda dhexe oo leh saddex kamaradood oo gadaal ah gudaha Spain.
Google Pixel 3 iyo Pixel 3 XL, waa sidan marka loo barbar dhigo tartanka
Ka dib markii la soo saaray Google Pixel 3 iyo Pixel 3 XL, heerka ugu sarreeya dhammaadkiisa waa la ballaariyay waana adag tahay in la helo kaas oo ah kan ugu habboon ee baahiyahayaga ku habboon.
Qiyaasta Xiaomi Mi 8 waxay dhaaftay 6 milyan oo unug oo la iibiyay
Xiaomi Mi 8 ayaa ka badan 6 milyan oo unug oo la iibiyay. Raadi wax badan oo ku saabsan iibka-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha adduunka oo dhan.
Taariikhda la soo saaray ee OnePlus 6T ayaa lagu xaqiijiyay Yurub. Ogow wax badan oo ku saabsan goorta dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha ay imaaneyso Yurub.
Faahfaahinta iyo sawirrada Sharafta 8C waxay ka muuqdaan VMall: taleefankii ugu horreeyay ee lala yeesho SoC SD632
Honor 8C ayaa ka muuqda VMall ka hor intaan la soo saarin oo ay weheliso qeexitaankiisa farsamo iyo sawirradiisa. Baro dhammaan wixii ku saabsan moobiilka xiga ee shirkadda.
Xaqiijiyay: Honor Magic 2 wuxuu yeelan doonaa taageero ah 40-watt oo degdeg ah oo lagu soo oogo
The Honor Magic 2 wuxuu ku dhufan doonaa suuqa iyadoo lagu taageerayo lacag-siinta degdegga ah ee 40 watts. Baro wax badan oo ku saabsan xaqiijintaan ay bixiyeen maamulaha shirkadda.
Habemus Google Pixel 3 iyo 3XL: G weyn wuxuu u socdaa wax walba oo leh Kaaliyaha iyo sawir qaadista
Google waxay qaadatay waqtigeeda maanta soo bandhigida Pixel 3 iyo Pixel 3 XL. Laba telefoon oo siin doona waxyaabo badan oo lagaga hadlo oo aad hadda iibsan karto.
Sida loo raaco dhacdada bandhigga ee Google Pixel 3
Halka laga raacayo munaasabadda soo bandhigga Google Pixel 3. Soo ogow meelaha la socda dhacdadan soo bandhigidda.
Nokia 7.1 Plus wuxuu horey u lahaa taariikh rasmi ah oo la soo bandhigi doono
Nokia 7.1 Plus soo bandhigida taariikhda ayaa la xaqiijiyay. Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda taleefanka Nokia la soo bandhigi doono.
Waxaa jiri doona Huawei Mate 20X oo loogu talagalay cayaartoyda
RASMI AH: Waxaa jiri doona Huawei Mate 20X gaar ah oo loogu talagalay cayaartoyda. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee sumadda Shiinaha ay ku soo bandhigi doonto munaasabadda.
ZTE wuxuu bilaabi doonaa Nubia Z18S sida Nubia X Oktoobar 31
Nubia Z18S ayaa suuqa u gali doonta sidii Nubia X, sida ku cad boodh rasmi ah oo rasmi ah, kaas oo waliba muujinaya in la soo bandhigi doono 31-ka Oktoobar.
Naqshadeynta 'Moto G7' ayaa la muujiyey iyada oo ay ugu wacan tahay 360-degree oo fiidiyoow-bixiye ah
Moto G7 wuxuu ka muuqday 360-degree oo muuqaal-bixin ah. Ka baro wax badan oo ku saabsan naqshadeynta qofka beddelaya G6 ee la bilaabay bilo ka hor.
Maamulaha OnePlus ayaa cadeeyay: ka saarida qalabka maqalka wuxuu ahaa go'aan adag
Peter Lau waa agaasimaha guud ee shirkadda iyo aasaasaha shirkadda dhowaan bilaabi doonta OnePlus 6T. Wuxuu si cad usheegay: saarida qalabka codka maqalku ma sahlana.
Huawei Mate 20 Pro wuxuu noqon lahaa taleefanka ugu awoodda badan sanadkan, sida ku cad tijaabooyinka AnTuTu
Huawei Mate 20 Pro ayaa lagu dhaliyay AnTuTu iyadoo lagu qiimeynayo taas oo ka dhigeysa mid ka sareysa boosteejooyinka ugu awooda badan Android. Waan kuu balaarinay!
Sida looga isticmaalo Samsung Cloud kombiyuutarka
Haddii aad rabto inaad marin ka hesho xogta aad ku kaydiso koontadaada daruuraha Samsung, laakiin aadan haysan qalabkaaga, waxaad ku sameyn kartaa adeegga shabakadda ee ay na siiso.
OnePlus wuxuu ku dhawaaqay taariikhda soo bandhigida ee OnePlus 6T
OnePlus 6T waxaa la soo bandhigi doonaa Oktoobar 30 si rasmi ah. Raadi wax badan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka sumadda Shiinaha.
OUKITEL WP1: Nooca casriga ah ee casriga ah ee nooca casriga ah
OUKITEL WP1: Qeexitaannada taleefanka cusub ee rooga ah. Ka raadi wax walba oo ku saabsan taleefanka cusub ee rooga ah ee suuqa ku soo dhacaya dhawaan.
Dib u eegid Umidigi Z 2 PRO
OnePlus 6T taariikhda sii deynta suurtagalka ah ayaa xaday
Shaaciyey taariikhda suurtagalka ah ee bilaabida ee OnePlus 6T. Ogow taariikhda ay imaaneyso dhamaadka-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha.
Google Pixel 3 XL oo iib ah kahor soo bandhigideeda
Pixel 3 XL wuxuu ka bilaabmayaa Hong Kong kahor soo bandhigiddiisa. Raadi wax badan oo ku saabsan bilawga taleefanka kahor.
Qeexitaannada taleefanka gacanta ee ugu horreeya Samsung oo wata 4 kamaradood ayaa la sifeeyey
Dhowr sano ka hor, tartanka si loo arko shirkadda soo saarta oo tiro badan oo megapixels ah ku dartay kamaradaha ...
Heerka Moto G7 waxaa ku jiri doona afar taleefan
Motorola ayaa soo saari doonta afar taleefan oo ku kala jira Moto G7. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan noocyadan kala duwan ee taleefannada saxiixa sanadka soo socda.
Samsung waxay ku noqotaa dhabbaha diiwaanka faa'iidada
Samsung waxay u dooneysaa iyada oo leh faa iidooyin stratospheric ah rubuca saddexaad ee sanadka. Iibinta shaashada iyo xusuusta qayb ahaan eed ayaa leh.
Samsung ayaa hogaamineysa suuqa taleefannada sare ee Hindiya
Samsung waxay ku jirtaa shirkadda leh saamiga ugu badan ee suuqa taleefannada ee Hindiya. Waxbadan ka baro warbixintan.
Xiaomi Mi A2 wuxuu la kulmaa dhibaatooyin batari
Dhibaatooyinka isticmaalka batteriga ee Xiaomi Mi A2. Ka ogow wax badan oo ku saabsan cilladaha taleefankaaga ku haysta batterigiisa.
Motorola Moto One ayaa si rasmi ah looga bilaabay dalka Spain. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilaabida taleefanka nooca dhexe.
Kaamirada Huawei P20 Pro looma dhaafo midka iPhone XS
Kaamirada cusub ee iPhone XS ayaan ku guuleysan inay dhaafto tayada ay Huawei P20 Pro na siineyso maanta
Qalabka 'Android Pie beta' wuxuu bilaabmayaa inuu gaaro Huawei P20 Pro Yurub
Huawei P20 Pro ee Yurub wuxuu helayaa beta Pie beta. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cusbooneysiinta taleefannada beta-kan.
LG V40 ThinQ hadda waa rasmi: Dhamaadka dhamaadka oo leh shan kamaradood
LG V40 ThinQ: Qeexitaannada, Qiimaha iyo Daahfurka. Raadi dhammaan wixii ku saabsan dhamaadka sare ee cusub ee sumadda Kuuriya horayba si rasmi ah loogu soo bandhigay.
Muuqaalka Sony Xperia XA3 waxaa lagu sifeeyaa qaab cusub [Muuqaal]
Naqshadaynta Xperia XA3 waxaa lagu sifeeyay fiidiyow cusub oo 360-degree ah. Ogow muuqaalka terminalkan soo socda ee guriga Jabbaan.
Shaaciyey taariikhda soo bandhigida ee Xiaomi Mi Mix 3
Waxaan horey u ogaanay taariikhda soo bandhigida ee Xiaomi Mi Mix 3. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda ay dhamaadka-Xiaomi imaan doonto.
Huawei Mate 20 wuxuu muuqaal ka sameeyaa Geekbench oo uu la socdo Kirin 980
Huawei's Mate 20 wuxuu ka soo muuqanayaa Geekbench Benchmark oo leh Kirin 980. Soo ogow dhibcaha lagu duubay keydka.
OUKITEL C11 Pro: OUKITEL cusub oo dhex-dhexaad ah
OUKITEL C11 Pro: Noocyada udub dhexaadka cusub. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan moodeelkan cusub ee shirkadda bartamihiisa.
Sharafta mudada dheer la sugayay ee 8X ayaa timid
Honor 8X ayaa horeyba looga heli jiray dukaamada ilaa shalay, taleefan casri ah oo loo yaqaan 'taaj dhexe' (oo ogolaansho laga helayo Xiaomi).
Daadinta Sony Xperia L3 waxay muujineysaa dareeraha faraha dhinac iyo laba kamarad
Fiidiyowga ayaa muujinaya xogta ugu horreysa ee Sony Xperia L3, oo ah taleefan dhexdhexaad ah oo ka socda Sony oo dhowaan iman doona
Xaqiijiyay naqshaddii kama dambaysta ahayd ee OnePlus 6T ee sawirradeeda rasmiga ah
Naqshadeynta OnePlus 6T waxaa lagu xaqiijiyay sawiradeeda cusub. Raadi wax badan oo ku saabsan naqshadeynta-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha.
Kontaroolka fog ee S Pen-ka cusub ee Galaxy Note 9 wuxuu la jaan qaadayaa barnaamijyada kale
Samsung ayaa ku dhawaaqday inay u oggolaaneyso horumariyeyaasha inay galaan S Pen SDK si loo ballaariyo tirada barnaamijyada la taageerayo.
Faahfaahinta saddexda kamaradood ee Galaxy S10 waa la sifeeyey
Qeexitaannada ugu horreeya ee waxa Samsung Galaxy S10 noqon doona durba waxay bilaabeen inay daataan
Nokia 5.1 iyo Nokia 2.1 ayaa si rasmi ah looga bilaabay dalka Spain
Nokia 5.1 iyo Nokia 2.1 ayaa si rasmi ah u yimid Spain. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilaabista labada taleefan ee shirkadda.
OUKITEL K7 Power: Qaabka cusub ee leh batari 10.000 mAh ah
OUKITEL K7 Awood: Nooca cusub ee bartamaha. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan bartan-dhexaadkan cusub ee ka soo baxa magaca Shiinaha ee suuqa ku soo dhacaya bishan.
Iskuday OnePlus 6T kahor qof kasta oo bilaash ah
Baro sida loo helo barnaamijkan tijaabada ah ee 'OnePlus 6T' si aad u hesho qayb bilaash ah gurigaaga ka hor qof kale.
Samsung Galaxy A6s: qeexitaannada ku soo dhacay TENAA
Samsung Galaxy A6s ayaa lagu sii daayay TENAA iyadoo dhowr ka mid ah qeexitaankiisa farsamo. Soo ogow waxa shirkaddu noo diyaarisay.
Huawei Y9 2019: Shirkadda Huawei ee dhexdhexaadka cusub
Huawei Y9 2019: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub nooca Shiinaha ee maanta la soo bandhigay.
ZTE Axon 9 Pro wuxuu bilaabi doonaa bartamaha bisha Oktoobar dalka Shiinaha
ZTE Axon 9 Pro wuxuu ku dhufan doonaa suuqa Shiinaha bartamaha Oktoobar, sida lagu sheegay xaqiijin dhowaan ay sameysay isla shirkadda.
Samsung Galaxy Note 9 waxaa lagu cusbooneysiiyay hagaajinta kamaradaha waaweyn
Samsung Galaxy Note 9 wuxuu helayaa cusbooneysi cusub oo bixiya hagaajinta qaybta sawirada. Soo ogow!
Realme 2 Pro waa rasmi oo leh waxqabad heer sare ah
Realme 2 Pro waxaa lagu soo bandhigay 6.3-inji FHD +, Snapdragon 660, iyo in ka badan. Ogow wax walba oo ku saabsan bartanka dhexe.
LG V40 ayaa ka muuqda Geekbench oo aan lahayn Android 9.0 Pie
LG V40 wuxuu ka soo muuqday Geekbench Benchmark oo leh dhowr qeexitaankiisa. Waxbadan ka baro calanka soo socda ee Kuuriyada Koofureed.
Samsung Galaxy J4 + iyo J6 + ayaa yimid Spain
Samsung waxay soo saartay Galaxy J4 + iyo J6 + Spain. Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaanshaha labada taleefan ee cusub ee shirkadda Kuuriya laga leeyahay Spain.